မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှ အော်သံများ: ဆဲဆိုခြင်းယဉ်ကျေးမှု နှင့် အနုပညာဒဏ်ရာ !
ဆဲဆိုခြင်းယဉ်ကျေးမှု နှင့် အနုပညာဒဏ်ရာ !
________________ ______________ ________________
ရှေးစာဆိုများ၊သူတော်ပီပီများ၊ ကျွန်တော်တို့၏လူကြီးမိဘများက နှုတ်ချိုခြင်း ၊ အပြောအဆို လိမ္မာခြင်းဆိုင်ရာ အတွက်ဆုံးမလမ်းညွှန်၊သွန်သင်ရေးဖွဲ့ခဲ့ကြသော ကဗျာ၊လင်္ကာများစွာကို သတိတရပြန်ဖတ်မိလေတိုင်းကျွန်တော့်စိတ် တွင် ပြန်လည်ချေပချင်စိတ်ဖြစ်မိသည်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် သက်တူရွယ်တူလူငယ်များသည်လည်းကောင်း၊ကျွန်တော်တို့၏ရှေ့မျိုးဆက်များသည်လည်းကောင်း နာကျင်မှုခေတ်ထဲတွင် မလွှဲမရှောင်သာ ပျော်ဝင်စီးမျောခဲ့ကြရသည်။သူတို့ဆီ မှ ထွက်ကျ ပွင့်ထွက်လာသော စာများ၊ကဗျာများသည် သွေးအလိမ်းလိမ်းပေကျံလျက်။ တချို့ကတောက်ခေါက်သံ ရွှဲရွဲစို လျက်။
ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်ရာလူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း “အမိယုတ်တော့ နှုတ်ကြမ်း၏ ၊အဖယုတ်တော့ ကိုယ်မူရာ ကြမ်းတမ်း၏”ဟူသောစကားကို တော်တော်များများမကြာခဏ ဆိုသလို ပြောဆိုလေ့ရှိကြ သည်။ဆဲဆိုခြင်းသည်လည်းနှုတ်ကြမ်းခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဟု အများစိုလိုလို သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် လူအများစုသည်ဆဲဆိုခြင်းအပြု အမူ၊နှုတ်ထွက်စကားတို့ကို ရှောင်ကျဉ်ကြပြီလောဟု မေးမြန်းစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဆဲဆိုခြင်းသည်မကျေနပ်ခြင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသော ၊ အားမလိုအားမရခြင်းကို အော်ဟစ်ဖောက်ခွဲပစ်သော အ ပြုအမူဟုဆိုသောမည်သူမှ ငြင်းအံ့မထင်။ရိုင်းစိုင်းမှုထဲတွင်လည်း အလှတရားတို့ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်နာ နာကျင်ကျင် ခံစားမိသောအတိတ်များအတွက် တခုတ်တရမြတ်မြတ်နိုးနိုး ပင်ဆဲဆိုနေရ / ဆဲဆိုနေကြပါသည်။တချို့ကသွေးစိမ်းရှင်ရှင်ကျသော အနုပညာမြောက်ဆဲဆိုခြင်းမျိုးဖြင့် လှပစွာဆဲဆိုနေကြပါသည်။ တချို့ကကိုယ့်နှလုံးသားပေါ်ထု ထွင်း၍ မျှော်လင့်ခဲ့သောအတိတ်ကို လည်းကောင်း ၊ မျှော်လင့်နေသောအနာဂတ်ကိုလည်းကောင်း လှပစွာဆဲဆိုနေကြပါ သည်။
အမျိုးပါ ဆဲချင်ပေါ့လေး” ကိုလိုနီခေတ်ဦးပိုင်းတွင် အချုပ်တန်းဆရာဖေ၏ဆဲဆိုသောအသံကိုဖော်ထုတ်ရေးဖွဲ့ခဲ့သောတေးထပ်သည်အခုတောင် လှုတ်ခတ်ဆဲ။သူ၏ဆဲချင်သောအသံတွင် ဝေဒနာပါသည်။ စေတနာပါသည်။ သူ့ရင်တွင်းမကျေနပ်ချက်ကိုတတ်နိုင်သရွေ့ဖော်ထုတ်ပြသွားခြင်းမျိုးသာဖြစ်သည်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာ ခရမ်းပြာထက်လူကလည်း
ကြယ်တွေကို ထုခွဲကာ ရှာမတွေ့ပြီးတဲ့နောက်
ဟု သူ့ကဗျာတစ်ပုဒ်တွင် ရေးဖွဲ့ခဲ့ဖူးသည်ကို ကျွန်တော်ဆဲချင်၊ ဆိုချင်စိတ်ဖြစ်တိုင်းသတိရမိမြဲ။ အချုပ်တန်းဆရာဖေ၏ဆဲ ဆိုခြင်းမျိုး၊ ဆရာခရမ်းပြာထက်လူ၏နာကျင်ဝေဒနာမျိုး ကိုတော့တော်တော် များများ ထောက်ခံကြရပါလိမ့်မည်။
ဆဲဆိုခြင်းအထွေထွေ ၊ အမျိုးမျိုးရှိသည်ဆိုပါက လူတစ်စုဖြစ်စေ၊တစ်အုပ်တစ်သင်းဖြစ်စေနှာခေါင်းရှုံ့ကြ လိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော် ချီးမွှမ်းလိုသော ဆဲဆိုခြင်းမျိုးထဲတွင်ဂဏန်းကောင်တွေ လို ဘေးတိုက် ကန့်လန့်သွားရင်း သူများအပြစ်ကိုသာစောင့်ကြည့်ဝေဖန်ဆဲဆိုခြင်းမျိုးတော့မပါဝင်နိုင်သည် မှာသေချာ ပါသည်။ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင် ထိုသို့ဘေးထိုင် ဘုပြောသူတို့၏ဆဲသံ၊ အမှန်တစ်ခုကိုသာ ရှေ့တည့်တည့်ရှု၍အားမလို အားမရဖြစ်သူတို့၏ဆဲသံဆို သံ စသည်ဖြင့်များပြားလျှံဝေနေပါသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် လူတို့သည် မွေးဖွားလာကတည်းကပင်“အူဝဲ အူဝဲ” ဟု၍ ကိုယ်လိုချင်ရာကိုတောင်းဆိုအော် ဟစ်ခဲ့ကြသည် မဟုတ်ပါလား။ မိမိထင်မြင်ချက်၊မိမိမကျေနပ်ချက်တို့ကို သူတစ်ပါးက လာရောက်ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်သော အခါ ပေါက်ကွဲလွင့်စင်တတ်ကြသည်မှာလည်းဓမ္မတာပင်ဖြစ်၏။
စာရေးဆရာမင်းလူ၏လုံးချင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ်တွင်ဖြစ်သည်။၀တ္ထုစာအုပ်အမည်က “သူ့ဆံပင်နှင်းဆီပွင့်တွေ နဲ့” ။ဇာတ်ကွက်တစ်နေရာတွင် အချိုးတွဲကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရသည် မှာမှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိလှသည်။
ဖော်ညွှန်းပြသွားသည်။ဤသို့သော ဆဲဆိုခြင်းမျိုးကို ယဉ်ကျေးသောဆဲဆိုခြင်းဟုသာ အမည်တပ်၍ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ကိုယ့်ဝေဒနာဒဏ်ရာကိုထို သို့ဖော်ပြရန်သာ တတ်နိုင်ခဲ့ကြသည် မဟုတ်လော။
ကျွန်တော်တို့တွင် ဆဲဆိုစရာပေါင်းများခဲ့လေပြီ။ အတိတ်ကိုမျှော်ငေးကြည့်ရင်းမကျေမနပ် မထွေးနိုင်၊မအန် နိုင်ဖြစ်ရ၏။ မရေရာသောအနာဂတ်ကို ငေးမောရင်း သက်ပြင်းပူတွေခြွှေခြွေချနေရသည်။ တချို့က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ တွင် ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း ဆဲဆိုအပြစ်တင်လျက်။တချို့က ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းကြည့်ရင်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်။တချို့ က သတင်းစာဖတ်ရင်း ငေးငိုင်မိန်းမောလျက်။
မောခဲ့ကြလေပြီ။ ဆဲဆိုရန်မဆုံးနိုင်သော အဖြစ်အပျက်အဟောင်းတို့အတွက် နာကျင်ခဲ့ရလေပြီ။
အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန် ၊အနာဂတ် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေကြောင်းမှာ မည်သူမှငြင်းဆို၍မရသော အမှန်တရားစစ်စစ်ဖြစ်သည်။အတိတ်၏အကျိုးဆက်များကို လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်တွင် ခံစားနေရသကဲ့သို့ပင် ပစ္စုပ္ပန်၏အကျိုးဆက်များကို နောင်တစ်ချိန် ခံစားကြရဦးမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။ငြင်းဆိုကြသူများ လည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သေချာသည်ကတော့ ပြီးခဲ့လေသောကာလ၊အတိတ် (သို့မဟုတ်)သမိုင်းကိုကား မည်သို့မှ ဖျောက်ဖျက်ဖြစ်၍မရသလို ငြင်း ဆို၍လည်းမရခြင်းပေ။
တချို့က အတိတ်ကိုမေ့ထားချင်ကြသည်။ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။မေ့ထား၍ရနိုင်ကောင်း ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ လိမ်ညာပုန်းကွယ်၍တော့ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အတိတ်ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ကဗျာ တိုတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ မည်သည့်မဂ္ဂဇင်းတွင်မှ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းမခံခဲ့ရပါ။
ခုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သူဟာဇာတ်လိုက်
နောက်ဆို စာအုပ်တွေထဲ မင်နီတွေနဲ့နာမည်ကြီးဦးမှာ။
တိုနန့်နန့်ဤကဗျာ၏နောက်တွင် ရှည်လျားညည်းငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောအတိတ်ကိုကြိတ်မနိုင်၊ခဲမရအသံ ၊အားမလိုအားမ ရအသံတို့ ရောစွက်နေပေလိမ့်မည်။ အတိတ်ကို နောက်တစ်ကြိမ်လည်းခရီးသွား ဟန်လွှဲ ပင်ဖြစ်စေ မည်သည့်အခါတွင်မှ ပြန်မတွေ့ချင်တော့ပါ။
တချို့စာမျက်နှာများကို မေ့လွယ်ကြသည်။တချို့စာမျက်နှာများကိုစွဲစွဲထင်ထင် ရှိဆဲ။ မည်သည့်လက်နှင့်မှ ဖျက်မရလေသော အမှားများသည်လည်း ချင်းချင်းနီလျက်။ “အမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်” ဟု ကျွန်တော်ချစ်ခင်လေး စားရသော ၀တ္ထုတိုရေးဆရာမောင်နှင်းပန်းဆီမှမကြာခဏကြားရတတ်သည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင်“အမှားတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါ အမှားပေါင်းများစွာဟာ အမှန်တစ်ခုဖြစ်သွား တတ်တယ်”ဟုလည်း မေးရိုးတွေထောင်ထလုသူကပြော တတ်ပြန်သည်။ သူ့စကားကို ရံဖန်ရံခါလိုလို ငေးငိုင်၊အားအင်မဲ့စွာ စဉ်းစားကြည့်မိသည်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသည် အတိတ်ကာလ၏အမှားပေါင်းများစွာ ၊ အမှောင်ထုထည်များကြားမှ တိုးဝှေ့ဖူးပွင့်ခဲ့ရသောမလှမပ ပန်းပွင့်များလေလား။
ပစ္စုပ္ပန်ကိုငေးရီကြည့်မိတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ချစ်စွာသောကမ္ဘာကြီးသည် ဟိုနေရာတစ်ပွက်၊သည်နေရာတစ်ပွက်ဒေါသမီးလျှံများ ၊ ရန်လိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြား အငြင်းပွားမှုတွေကြား ဆူပွက်ထလျက်။တချို့သည် မှုန်ပျဝေရီကာ မင်နီ စက်တို့ဖြင့်ကျန်ခဲ့လေပြီ။ တချို့သည် လူသေဆုံးပြီးသည့်တိုင်အောင်၎င်းတို့ရှင်သန်စဉ်က ပြုမူခဲ့ကြသော လူသားဆန်ဆန် လုပ်ရပ်များအတွက် ယခုတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊နောင်တိုင်အောင်လည်းကောင်းဝံ့ကြွားခန့်ညားလျက်။
ဟီလာနိုဂေးလေယာဉ်ပေါ်မှ လေယာဉ်မှူးသည် ဟီရိုရှီးမားကိုဗုံးကြဲချပြီးသော် “ဘုရား၊ ဘုရား”ဟူသောစာလုံး ကိုသာ သူ့ပျံသန်းမှုမှတ်တမ်းတွင်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆရာမြသန်းတင့်ဘာသာပြန်သောရသစာတမ်းတစ်ပုဒ်တွင်ဖတ်ခဲ့ ရဖူးသည်။ ထိုသို့သော မိမိ၏ခလုတ်တစ်ချက်၊ မိမိလက်တစ်ဖက်၊မိမိပြုမူလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းအစ တစ်ခုအတွက် နောင်တရ လက်စမဆုံးသူတွေ မည်မျှများမည်နည်းဟုတစ်ဆက်တည်းမှာ စဉ်းစားမိပြန်သည်။ သို့သော် မိမိလုပ်ရပ်ကိုပင် ဂုဏ်ယူမ ဆုံးနိုင်ကြသူများ၊ဝေတွေနောင်တဘယ်အခါမှာမှ မရကြသူများလည်း ရှိနေနိုင်ပါသေးသည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပြီးခဲ့၊ဖြစ် ပျက်ခဲ့သမျှကိုပြန်ပြင်မရတော့သည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခြင်းအရာတို့မှ သင်ခန်းစာယူကာ ပစ္စုပ္ပန်တွင်အ နာဂတ်လှအောင် ထုဆစ်ရုံမှ တစ်ပါး အခြားမရှိပြီ။
မေ့ပျောက် မေ့ဖျောက်ရန်ခက်ခဲသောအတိတ်စာမျက်နှာများအတွက် လူတိုင်းလိုလို မဆဲချင်မဆိုချင်ကြတော့ ပါ။ သို့သော်တချို့စာမျက်နှာများက ကျွန်တော်တို့ကိုခြောက်လှန့်ဆဲ။ နာကျင်မူးမူးအမှောင်များကြားဝယ် မြှုပ်ချည်ပေါ်ချည် နံရံကြားမှ အော်ဟစ်သံများ၊ မိုးခေါင်ရေရှားရပ်ဝန်းမှတောင်းဆိုသံများ ၊ အရာရာသည် ခါးသီးပြတ်ရှခဲ့လွန်းသည်။ ထို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွင်ယဉ်ကျေးသောအော်ဟစ်ဆဲဆိုခြင်းမျိုးကိုသာ တတ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်ပါလား။
တချို့စာမျက်နှာတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ဆဲဆိုခဲ့ကြရသည်။နောင်လာမည့် စာမျက်နှာများ အတွက်မဆဲဆို ရစေရန် ဆုတောင်းကြရပါဦးမည်။ မေ့ပစ်ရန်ခက်ခဲသော အတိတ်ခါးခါးများအတွက် အိပ်ပျော်ရန်အားထုတ်ကြရပါဦးမည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးမပီသသောဖခင်ကို အိမ်ထောင်စုသားတို့မကျေမနပ်ဖြစ်ပါက ကွယ်ရာတွင် အံကြိတ်ငိုကြွေးရုံသာတတ်နိုင် ကြသကဲ့သို့ပင် ကျွန်တော်တို့တွင်လည်းတစ်စုံတစ်ရာကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် မကျေမနပ်ဖြစ်ရသော် ဆဲဆိုတောက်ခေါက် ရုံသာ ၊ စကားလုံးဝါကျများကိုအားအင်ချိနဲ့စွာတည်ဆောက်ရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ထပ်မံ၍ပင် နောင်လာမည့်စာမျက်နှာများအတွက် မဆဲရမဆိုရစေရန် ဆုတောင်းကြရပါဦးမည်။
( ပန်းချီသရုပ်ဖော် _ မျိုးမြင့် )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:45 PM
Labels: ရသစာတမ်း, အက်ဆေး
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) December 8, 2013 at 12:52 AM
အင်မတန်မှ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ရသစာတမ်းလေးတစ်ခုပါရှင်။ အပြန်ပြန်ဖတ်ရင်း လေးစားမိပါတယ်။
၀တ္ထုတို (10) interview (1) Poem (11) ကဗျာ (506) ကဗျာရှည် (14) ကျနော်ကြိုက်မိသောကဗျာများ (2) စာညွန့် (3) စာအုပ်မိတ်ဆက် (2) တစ်မျက်နှာဝတ္ထုတို (1) ပထမဆုံးပုံနှိပ်ခံရသောစာမူ(ကဗျာ) (1) ရသစာတမ်း (2) အက္ခရာလမ်းကဗျာအရေးအသား (4) အက်ဆေး (2) အိုထူး ရေးတဲ့ ကဗျာ (4) ဆောင်းပါး (1)
( မြသန်းတင့် )
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်, ရန်ကုန်, Myanmar (Burma)
သူတို့ ရေးသီရာ ဖတ်စရာစာ
မေ ၊ လားရှိုး” ၏ လမ်းခွဲမှ အလှူတစ်ခုကို သာဓုခေါ်မိခြင်း
ဖွင့်မကြည့်နိုင်တဲ့စာဟာ အမည်မသိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အမည်မသိတဲ့မြို့က လာတယ် ထမင်းလုံးကိုချေပြီးစာအိတ်ကိုပိတ်ထားသလားမသိရ ချိပ်ကိုအရည်ကျိုပြီးစာအိ...
အရည်မရ အဖတ်မရ ရန်ကုန် ၊ ရေခဲစိမ်နေပြည်တော် !
ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေးဆိုတော့ လယ်သမားတွေက ရယ်ကြတယ် ရန်ကုန်က အလုပ်လက်မဲ့လူငယ်တွေက အဲဒီ့စကားလုံးတွေပေါ်ကွမ်းတံထွေးတွေ ထွေးချလိုက်တယ...
ဟာသကဗျာ ယူကြဦးမလား ဟာသကဗျာ ဖတ်ကြဦးမလား ဟာသကဗျာ ပေါက်လွှတ်ပဲစားရေးထားတတ်တဲ့ ဟာသကဗျာ ဖတ်ပြီးရင် ငိုရမယ့် ဟာသကဗျာ ကမ္ဘာကြီးထဲကို တဟီးဟ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှဓားတွေဟာ မီးဖိုချောင်သုံးဖို့နဲ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဖို့ပဲ ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ဖြစ်တယ် ကိုယ်က အဲဒီလို သီချင်းထဆိုလိုက်တော့ သေန...
အမှောင်တွေ ၊ အမှောင်တွေ...။အမှောင်ထဲမှာ သူ့စိတ် နစ်မျောစီးဆင်းသွားတယ်..။ပိန်းပိတ်အောင်မဲမှောင် နေတဲ့ညဟာ ည အတိုင်းသာရွေ့လျားလည်ပတ်။အိပ် မက်ေ...
သက်ရှိသတ္တ၀ါ A နှင့် B တို့၏ သမားရိုးကျ အသည်းကွဲပုံပြင်(သို့မဟုတ်)ဇာတ်လမ်း
ဤအဖြစ်အပျက်ပါလူသတ္တ၀ါထီးတစ်ဦးကို အေဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးကျန်လူသတ္တ၀ါမ တစ်ဦးကို ဘီဟုလွယ်လွယ် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။အမည်နာမတပ်ရန်မလိုသောအရာ/မှတ်သာ...
အဆင်မပြေခြင်းများ ( ၂ )
ငါ့အသက်ရှူသံတွေ တကယ်က ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ ငါ့အသက်ရှူသံတွေ ဒါ အချစ်မဟုတ်ဘူးကွာ မေတ္တာတရားစစ်စစ်သာ ဖြစ်တယ် တကယ်က စံပယ်ပင်လေးတစ်ပင်သေသွာ...
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ မြို့တော်၏ မိုးရာသီကာလ
(၁) ထိုမွို့တျော၏ အမညျနာမကို “ရပေျေါမွို့” ဟူ၍ ပွောငျးလဲ ချေါဝျေါတော့မညျဖွဈကွောငျး သတငျးစာမြား၊ ရုပျမွငျသံကွားလိုငျးမြား၊ ရဒေ...
ကွယ်လွန်သွားတဲ့အလံတော်ကို မီးရှို့လိုက်တော့ ဖွာခနဲ ကျလာတဲ့ ပြာစတွေ !
အဲဒီ့အလံတော်မှာ ငါတို့က အရောင်သေးသေးလေးတွေ အဲဒါကြောင့် ငါတို့ ပျော်တယ် ရိုးရိုးပျော်ရတာ အားမရလို့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ ငါတို့ပျော်တယ် င...
မေတ္တာတရားဖြင့်သာ ကမ္ဘာကိုသန့်ရှင်းစေတယ်ဆိုတာ တကယ်လို့များ မုသားစကားဖြစ်ခဲ့ရင် ကလေးတို့ရေ.....မုသာဝါဒကိုပဲ ဆက်ကျူးလွန်ကြကွယ် စင်ကြယ်သော...